Uncategorized – SunkoshiNews
जीतपुरसिमराः सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजनको जित सुनिश्चित
संगठन वडा र टोलसम्म कमिटीगत रुपमा सबल भइसकेको थिएन । प्रतिस्पर्धी एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरु उनको तुलनामा नगरवासीका...
Uncategorized • समाचार • हेडलाईन न्युज
सुनकोशी न्युज, २०७८ भाद्र २३ गते बुधबार । काठमाडौं । नेपाल सरकारले MCC लाई साेधेकाे ११ बुंदे प्रश्नको जवाफ पठाएको छ। आज जवाफ प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनायाे। नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ बुधबार नेपाल सरकारलाई पठाएको अमेरिकी राजदूतावास स्रोतले जनाएको छ...
लाग्यो कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा: क्रियाशील सदस्यको विवरण वेवसाइटमा
काठमाडौं -कांग्रेसले सबै जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको विवरण आफ्नो पार्टीको वेवसाइटमा राखेको छ ।
भदौं ७ गतेदेखि पार्टीको १४ औ महाधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । उक्त समयदेखि महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले सबै जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको विवरण वेवसाइटमा राखेको हो ।
देशभरिका क्रियाशील सदस्यको नाम हेर्न मिल्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
Uncategorized • मुख्य समाचार • विदेश • समाचार • हेडलाईन न्युज
कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले अब अमेरिकाको ग्रीनकार्ड र नागरिकता नपाउने
२०७७ असोज १९ गते सोमबार
काठमाडौं। कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले अब अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता पाउने छैनन् । अमेरिकाको नागरिकता तथा अध्यागमन सेवाले लागू गरेको नयाँ नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अक्टोबर २ मा जारी गरिएको नयाँ नीतिअनुसार नेपाल मात्र नभइ कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य वा कम्युनिस्ट...
खाली सिलिण्डरको मुल्य तोकियो
२०७७असोज २ गते शुक्रबार
काठमाण्डौं नेपाल एलपी ग्यास उद्ययो संघले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रयोग हुने खाली सिलिण्डरको मूल्य तोकेको छ।,
ग्यास बिक्रेताले फरक फरक मूल्यमा खाली सिलिण्डरको मूल्य लिएको भन्दै संघले पहिलो चरणमा वाग्मती प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगका सिलिण्डरको मूल्य तोकेको छ।
संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार वाग्मती प्रदेशभित्र...
कस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्वोधनले अत्यावश्यक भनेका सेवा क्षेत्रहरु ?
२०७६ चैत्र ७ गते,
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै चैत ९ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म १३ दिन अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक...
Uncategorized • हेडलाईन न्युज
एसएसपी शौरभ राणा यौन शोषणको आरोपमा निलम्बित
काठमाडौं : गृहमन्त्रालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सौरभ राणालाई निलम्बन गरेको छ।राणाविरुद्ध एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको र पदीय आचारणविरुद्ध काम गरेको आरोप छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले राणालाई निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याउँदै निलम्बनको रिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो।
संघीय प्रहरी इकाइ सुनसरीमा कार्यरत राणाले स्थानीय एक...
पत्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? हेराैं केही विकसित देशका कानुनी प्रावधान (म्युनिख घोषणापत्र)
नेपालमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि बनेको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन भएको अाराेप लागिरहेको छ। सरकारका कामहरूकाे अालाेचना गर्न पाउनु लाेकतन्त्रकाे साैन्दर्य हाे। तर सरकार मिडिया विधेयक ल्यायर प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खाेजिरहेकाे देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा संसारमा पत्रकार अाचार संहिता र कानुनको अवस्था कस्तो छ त ? यसबारे केही तथ्य यहाँ प्रस्तुत...